Zimbabwe clinch first Test victory in 5 years, beat Bangladesh by 151 runs - Worldnews.com
Zimbabwe thumped Bangladesh by 151 runs in the northeastern city of Sylhet on Tuesday to claim their first Test win in five years.
Imrul Kayes hit
Zimbabwe thrash Bangladesh for first away Test win in 17 years
Brandon Mavuta and Sikandar Raza shared seven wickets between them as Zimbabwe recorded their first Test win in five years with a thumping 151-run victory over Bangladesh...
Cricket Tue, 06 Nov 2018 AFP Sylhet, Bangladesh: Brandon Mavuta and Sikandar Raza shared seven wickets between them as Zimbabwe recorded their first Test win in five years...
Brandon Mavuta claims 4 wickets as Zimbabwe beat Bangladesh for long-awaited Test win
Sylhet: Brandon Mavuta and Sikandar Raza shared seven wickets between them as Zimbabwe recorded their first Test win in five years with a thumping 151-run victory over...
Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test: Sikandar Raza delivers as tourists head towards long-awaited win
Off-spinner Sikandar Raza claimed three wickets as Zimbabwe zeroed in on their first victory in five years against Bangladesh in Sylhet on Tuesday. Kyle Jarvis and Brendon...
SYLHET – Off-spinner Sikandar Raza claimed three wickets as Zimbabwe zeroed in on their first victory in five years against Bangladesh in Sylhet on Tuesday. Kyle Jarvis and...
SYLHET – Off-spinner Sikandar Raza claimed three wickets as Zimbabwe zeroed in on their first victory in five years against Bangladesh in Sylhet on Tuesday. Kyle Jarvis and Brendon Mavuta also chipped in with a wicket apiece as Zimbabwe reduced the hosts to 111—5 by lunch on the fourth day of the first Test. Bangladesh, chasing a record target of 321 runs in the fourth innings,...
SYLHET, Bangladesh: Taijul Islam claimed 11 wickets to lead Bangladesh’s fightback in the first Test against Zimbabwe on Monday, but the hosts still need a record chase to win in Sylhet. Bangladesh dismissed Zimbabwe for 181 in their second innings with Taijul returning impressive bowling figures of 5-62.Taijul’s effort boosted Bangladesh after they were bowled out cheaply for...
SYLHET, Bangladesh: Pace bowler Tendai Chatara and spinner Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet on Sunday. Chatara claimed 3-19 and Raza grabbed 3-35 as Zimbabwe bowled out the hosts for 143 runs after left-arm spinner Taijul Islam took 6-108 to end the visitors´ first innings on 282 in the morning....
SYLHET: Pace bowler Tendai Chatara and spinning all-rounder Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet on Sunday. Chatara claimed 3-19 and Sikandar grabbed 3-35 as Zimbabwe bowled out the hosts for 143 runs after left-arm spinner Taijul Islam took 6-108 to end the visitors’ first innings on 282 in the morning....